भारी बोक्नेलाई किन चाहियो प्यान ? - पब्लिक पाेष्ट
August 2, 2019 EP EDITORLeaveaComment on भारी बोक्नेलाई किन चाहियो प्यान ?
काठमाडौँ । धादिङका उर लामा मजदुरी गरेर मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । पाँचजना परिवारको खर्च उनैले जुटाउँछन् । मैतीदेवीमा १५ वर्षदेखि बस्दै आएका उनी सरकारले ल्याएको ‘एक व्यक्ति एक प्यान नम्बर’ नीतिदेखि सन्तुष्ट छैनन् ।
नुवाकोटका सानुकान्छा तामाङ १५ वर्षदेखि रिक्सा चलाएर दैनिक ६ सय रुपैयाँ कमाउँछन् । बुर्जुधारमा जहानसहित बस्दै आएका तामाङले भने, ‘हामी बिहान कमाएर बेलुका कमाइ खाने हौं । यसले अत्याचार नै गरेको छ । हामी यसलाई मान्दैनौं ।’
सुन्धारामा ३४ वर्षदेखि सानो फुटपाथ पसलबाट दैनिक २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएकी छन्, शान्ति श्रेष्ठ । उनले हालसम्म कुनै व्यावसायिक प्यान नम्बर बनाएकी छैनन् । ‘तीन वर्षअघि पनि यस्तै हल्ला चलेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘वडामा गएर बुझ्दा ठूला व्यवसायीका लागि मात्र अनिवार्य हो भनेपछि बनाइनँ ।’ साना फुटपाथ पसलका लागि होइन भनेपछि उनले नबनाएको बताइन् । थपिन्, ‘यो सरकारको हल्ला मात्र हो । फुटपातको पसललाई भनेको छैन ।’
तिरुपाती स्टोरका बलराम तुलाधारले २० वर्षदेखि ७ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । उनलाई कर तिरे पनि सरकारले जनताका लागि केही गर्न नसकेको गुनासो छ । ‘२० वर्षदेखि कर बुझाउँदै आएको छु,’ तुलाधरले भने, ‘खै जनतालाई सुविधा ? जहिले धूलो उड्ने बाटोमा बसेर कमाएको भाग सरकारलाई कर तिर्दामै ठिक्क हुन्छ ।’
नेपाली सेनाकी शोभा ढुंगाना बिहान ११ बजे नै आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर आइपुगेकी थिइन् । उनी सेवामा रहेको १० वर्ष भइसकेको छ । बिहानदेखि आएर बस्दा पनि उनले साँझसम्म पनि व्यक्तिगत प्यान नम्बर बनाउन पाइनन् ।
‘बिहानै आएको हो अहिले ४ बजिसक्यो आज बन्ला जस्तो लागेन,’ उनले भनिन्, ‘भित्रका कर्मचारी खाली सिस्टम छैन मात्र भन्छन् त्यो के हो हामीलाई थाहा छैन ।’ व्यक्तिगत प्यान नम्बर अनिवार्य भएपछि बनाउन आएको उनले बताइन् । यो व्यवस्थाले सरकारलाई सोझै कर तिर्न मिल्ने हुनाले नीति सही लागेको उनको भनाइ छ ।
सेवा सेक्युरिटिज क्यान्टिनकी कर्मचारी इन्द्रमाया घिमिरे पनि राजस्व कार्यालयमा आएकी थिइन् । उनको हातमा व्यक्तिगत प्यान नम्बर त थियो तर दुई दिन धाएर मात्रै काम पूरा भएको बताइन् । ‘दुई दिन धाएर भए पनि प्यान नम्बर बनाएँ,’ उनले सुनाइन्, ‘धेरैले आफ्नो आयस्रोत छलेर सरकारलाई कर बुझाउन ठगिरहेका छन् ।’ यो व्यवस्थाले सबैलाई करप्रति जिम्मेवार हुन सिकाउने उनको बुझाइ छ । कान्तिपुरबाट
उपत्यकाबाट मात्रै एक वर्षमा साढे १८ करोडको सुन बरामद
सार्वजनिक जग्गा जोगाउन जुटे स्थानीय तह
February 13, 2018 EP EDITOR
August 15, 2018 EP EDITOR
September 7, 2018 September 7, 2018 EP EDITOR